Bobabini abasetyhini kunye namadoda benza iimpazamo zesini, ezingafani nesini esahlukileyo. Makhe sizame ukuluhlu uluhlu lweempembelelo eziqhelekileyo zesini ezenza isondo esilungileyo singathandeki emehlweni abantu.
Amadoda ayithandi abafazi abazenza ngathi abafani nesondo
Amanye amabhinqa azenzele ukuba akayithandi isondo, ukuba ayinyamezela kuphela ukwenzela umntu ukuba ayenze. Oku kuziphatha kwenza abantu bavelele izilwanyana ezinomdla, okuyiyo, ngokuqhelekileyo, ayikho imnandi kakhulu.
Enyanisweni, isondo esinye sezigaba ezimbalwa apho umntu evula phambi komfazi. Ukuba ibhinqa lizenza ukuba isondo ayimnandi kuye kwaye akafuni ukwenza, ehlazekile, ngoko indoda iyaqala ukuvalela kumfazi, kwaye ngokukhawuleza iphelile ukumnxusa.
Khumbula, indoda ayiyi kuvula phambi kwakho, ukuba awuyiqondi kwaye ayikwazi ukwabelana ngeminqweno yakhe. Musa ukufihla kwiqabane lakho lobuthathaka kunye nobulili.
Amadoda ayithandi abafazi abangalokothi babonise inxaxheba kwisondo
Amadoda ayisoloko ejongene nayo yonke into ebomini. Ukuba ibhinqa ifuna isondo, kodwa ingabonakali oku, indoda iyaqala ukuziva ixanduva lokuphila kwabo ngokwesondo.
Ngokuhamba kwexesha, le ndlela yokuziphatha, njengomthetho, iqala ukucaphukisa.
Amadoda ayithandi abafazi abangazi kakuhle umzimba womntu
Okokuqala, abafazi abathandi amadoda angamazi umzimba wesetyhini kwaye bacinga ukuba umfazi uyavuya emva kokuthinteka kwiindawo ezithandana naye. Cinga ukuba abantu bafumana into efanayo. Kodwa ukuba ngababhinqa akusibi kakhulu kwaye bubuhlungu, ke umntu uyazibona isimo sengqondo sakho malunga nesipenisi njengesimo sengqondo kuye.
Ibhinqa elitshitshisa okanye elingathinti umntu, liyaphela. Kucacile ukuba akudingeki ukuba wazi kakuhle indlela yokunika umxhwenkwenkwe naye, kodwa unokuhlala ucela ukuba yintoni na indlela ayithandayo ngayo. Ndikholelwe, iqabane liza kuqonda le meko. Khumbula, ukuba ukhawuleza, uqale ngokukhawuleza umdlalo wesondo ngeepenisi, umntu unokucinga ukuba ufuna ukulala ngesantya.
Indoda ayifanele ibe nexanduva ngokupheleleyo kwi-orgasm yomlingani wayo
Oku akuthethi ukuba umntu unokungaqondi. Apha sithetha ngabasetyhini abangabonisi indoda indlela yokuziphatha kakuhle, into abathandayo nento engayithandiyo. Xa, emva komgudu omude womntu, umfazi uhlala enganelisekanga, uqala ukugxeka umlingane wakhe ngenxa yokungalindelekanga.
Ukuba umntu okwenene kubaluleke kakhulu ukunika ibhinqa i-orgasm, ngaphandle koko uqala ukuziva ngathi ulahlekile, ngakumbi xa iqabane lakhe limangalela ngalo. Ukuba uzama, kwaye uhlala ucebile, ngaphandle kokubonisa ukuba wenza kakuhle, kuqala ukucaphukisa kakhulu.
Indoda ayiyona ingqondo. Ngabantu abaninzi, ngelishwa, banelisekile ekunganeliseki okanye bazenzele i-orgasm, nje kuphela ukuba baxelele iqabane malunga nokukhetha kwabo ngokwesondo. Ungesabi ukuvula phambi komntu othandekayo.
Amadoda ayithandi "abalawuli bezesondo"
Amadoda ayithandi ukuba ibhinqa lizama ukulawula ngokupheleleyo inkqubo yonke yothando, rhoqo ibonisa indlela yokwenza kakuhle. Indoda ivakalelwa ngumfazi onjengale mvavanyo. Kubonakala ngathi unokucinga ukuba akakwazi kwaye akakwazi ukwenza nantoni ngaphandle kweengcebiso zakhe.
Ukuba iqabane lakho lenza into engalunganga, njengoko ungathanda, mxelele ngako, kodwa kungekhona ngexesha lesini.
Amadoda awayithandi abafazi abangenasifo
Ukuba iqabane lakho lizama, kwaye ungabonakali iimvakalelo zakho nganoma iyiphi indlela, unokucinga ukuba ucinga ngenye into, ongayikhathaleli; ukuba ulindele konke oku kuphelisa kungekudala okanye ukuba ulele. Ukufumana ukuphendula okufanayo, umntu ozama ukuphumelela kuyo yonke into, uqala ukuziva ngathi ulahlekile ngokupheleleyo.
Abasetyhini abaziphatha kwimibhedeni enjengophawu, amadoda ayamthiya ngokukrakra ngokukodwa kwaye ekugqibeleni bayeke ukunqwenela. Funda ukubonisa iimvakalelo zakho, xelela iqabane lakho okulungileyo kuwe, into oyithandayo, kodwa ungayidluli, kuba kukho umngcipheko wokuguqula ibhokisi yokuxoxa ngezesondo.
Amadoda ayithandi abesifazana bethetha embhedeni kakhulu
Kukho a mabhinqa abathi ngexesha lesondo bahlala bethetha okuthile ngothando, malunga neemvakalelo zabo, iimvakalelo kunye neminqweno. Kucacile ukuba ngale ndlela umfazi uzama ukujonga imvakalelo kunye nemvelo, kodwa ukuthetha okuninzi kakhulu kubi.
Ukuba iqabane lithetha into ethile, le ndoda iziva ibophekile ukuba okungenani iphendule. Iingxoxo eziqhubekayo ziphazamisa umntu ukuba angonwabi, okucaphukisa kakhulu. Uqala ukuphazamiseka, ucinga ukuba uthetha, endaweni yokugxila kwizinto zakhe neemvakalelo zakho.
Ukuba ubona isono esifanayo, ixesha elizayo uzama ukucwina nje ukwaneliseka, ugxininise ekuveleleni, kungekhona ngamagama.
Amadoda ayithandi abafazi abangenalo ixesha elaneleyo lokunyamekela ukubonakala kwabo
Akuthethi ukuba ngamnye umfazi kufuneka ahlale ebonakala njengomzekelo. Kwanele nje ukulungiswa kakuhle. Amadoda ayamthiya: imilenze engavinjelwe, iimbumba kunye nezinye iinxalenye zomzimba, ivumba elimnandi, iingubo ezinxibekiweyo, iinwele ezimbi okanye ezingaqhelekanga, ukukhangela imithi, iimpahla zangaphantsi ezifihlakeleyo, ukuzenzela okungenakusihlwa.
Zama ukujonga ngokwakho ngamehlo endoda uze ubone ukuba ungathanda wena. Ukuba impendulo ayibi, ngoko kufuneka ukhawuleze unike ixesha lokubonakala kwakho.
Amadoda ayithandi abafazi abangazithandayo
Amadoda ayithandi abafazi abasoloko bethetha ukuba babukeka bebubi, njengokungathi bacela ukuncoma ngokubonakala kwabo kubonakale.
Khumbula, ukuba awuzithandi kwaye uhlale unciphisa isidima sakho, indoda iya kugcina ikuphatha ngendlela efanayo. Kufuneka uzibone ngokwaneleyo kunye nesidima sakho, ngaphandle kokuphazamiseka nantoni na okanye ukugqithisa.
Ukunyangwa kobungcipheko kwabasetyhini
Isini esilungileyo - yintoni na?
Indlela yokucima ubuhlobo obusondeleyo kunye nomntu omtsha?
Iingcamango zobuhle zendoda nomfazi
Ukusetyenziswa kwesondo ngomfazi
Intombi kaTatyana Navka iqhubhisa i-parade ye-"Russian Radio"
Ubundlobongela kubomi bowesifazane
Umsebenzi kunye nobomi bomntu
Indlela yokulungiselela iholide emsebenzini
Hlangana nenkukhu inyama
Indlela yokuvelisa imilinganiselo emihle kunye nococeko kubantwana basesikolweni
Ukuthandana nabafana abapholileyo ukusuka kwiminyaka eyi-15-17 ubudala
Isimo sezulu eSochi ngoJuni 2016: eholidini ngokuzonwabisa!
Isifuba senkukhu yentaka ebisi
Indlela yokunciphisa umzimba ngokuncedisa i-yoga?
Ulwalamano phakathi komkhwekazi nomalokazana
Shish kebab kusuka kwingulube ehlambulukileyo kwiitamatati
Iipancakes ezinee-opiki kunye ne-anyanisi eluhlaza
Isaladi "I-Sesame Bean"